မိမိနိုင်ငံရှိအထက်တန်းကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်တို့ တွင်ဘွဲ့ ရရှိပြီး နောက်ဂျပန်နိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်တို့ တွင်လည်းကောင်း တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ လွန်တန်းတွင်တက်ရောက်လိုသူများအတွက်လည်း ကောင်းရည်၇ွယ်ပါသည်။
3 လတကြိမ်ကျင်းပသောအတန်းတင်စာမေးပွဲနှင့်အဆိုပါစာမေးပွဲ ရလဒ်ပေါ်တွင်မှုတည်၍အတန်းပြောင်းခြင်းဖြင့်ကျောင်းသားများ သည်အစဉ်သဖြင့်မိမိတို့ အဆင့်နှင့်ကိုက်ညီသောသင်ယူမှု့ များကို ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကာလပြီးဆုံးပါကဂျပန်နိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်များ၊ကောလိပ် များတွင်ပညာသင်ကြားရန်လိုအပ်သောဂျပန်စာအရည်အချင်း နှင့်ပြည့်စုံသောကျောင်းသားတဦးဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဂျပန်စာBasicⅠ・Ⅱ、IntermediateⅠ・Ⅱ、AdvanceⅠ・Ⅱ、Upper AdvanceⅠ・Ⅱ (အဆင့်အလိုက်)
ဂျပန်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ(EJU)ဖြေဆိုရန်အတွက် သချာင်္၊အထွေထွေဘာသာရပ်နှင့်TOEFL ဖြေဆိုရန်အ တွက်လည်းသင်ကြားပေးပါသည်။
ခန်းဂျိအထူးလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းအတန်း ၊ မနက်ပိုင်း တပတ်လျှင်3ကြိမ်၊ ညနေပိုင်းတပတ်လျှင်2ကြိမ် (ခန်းဂျိအသုံးမပြုသောနိုင်ငံမှကျောင်းသားများအတွက် သာ)
တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ အထိ (စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ၊အခြားရုံးပိတ်ရက်များနှင့် ကျောင်းမှသတ်မှတ်ထားသော　ပိတ်ရက်များတွင်အတန်းမရှိပါ)
မနက်ပိုင်းအတန်း 9: 15 ~12:45
ကျောင်းဝင်ကာလ 入学時期 လျှောက်လွှာလက်ခံမည့်အချိန်　申請期間 သင်တန်းကာလ　学習期間
Entry on April Sep.-Nov. of previous year 12 - 24 months
Entry on July Jan.-Feb. of this year 21-24 months
Entry on Oct. April-May of this year 18-24 months
Entry on Jan. July-Sep. of previous year 15-24 months
初級Ⅰ3လ
3ヶ月 ဤအခြေခံအဆင့်တွင်ဟိရခန၊ခတခနအပြင်အခြေခံခန်းဂျိ အရေး၊ အဖတ်ပြုလုပ်နိုင်ရန်၊လွယ်ကူသောနေ့ စဉ်သုံးစကားပြောများကို နားလည်နိုင်ရန်၊ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ့N4အဆင့်ကို အောင်မြင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
ひらがな、カタカナ、基礎的な漢字の読み書きができる。　簡単な日常会話と作文ができる。　日本語能力試験N4程度合格。
Basic Level Ⅱ
初級Ⅱ3လ
ブリッジ3လ
3ヶ月 BasicⅡမှ Intermediate သို့ အကူးတွင်ကျောင်းသားများပိုမိုနား လည်လွယ်ကူစေရန်သင်ကြားပေးသောအတန်းဖြစ်ပါသည်။ ခန်းဂျိအသုံးမပြုသောနိုင်ငံများရှိကျောင်းသားများထဲမှတက်ရောက် လိုသောကျောင်းသားများအတွက်သာဖြစ်ပါသည်။
中級Ⅰ3လ
3ヶ月 ခန်းဂျိ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်၍စာစီစာ ကုံးရေးသားခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ တီဗွီအစီအစဉ်များကိုနားလည် သဘောပေါက်ခြင်း၊မိမိ၏အတွေးအမြင်များကိုဂျပန်ဘာသာဖြင့်ဖော် ပြပြောဆိုနိုင်ခြင်း၊ဂျပန်စာအရည်အချင်းစာမေးပွဲ N3〜N2 အဆင့် ကိုအောင်မြင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
中級Ⅱ3လ
上級Ⅰ3လ
3ヶ月 တက္ကသိုလ်တွင်ဂျပန်ဘာသာဖြင့်လက်ချာလိုက်ခြင်း၊သုသေသနစာ တမ်းဖတ်ပွဲများ၊သတင်းစာနှင့်မဂ္ဂဇင်းများကိုဖတ်၍နားလည်ခြင်း၊ ဂျပန်စာနှင့်ပတ်သက်၍အထွေထွေအသုံးချမှု့ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါ သည်။ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ N2〜N1အဆင့်ကိုအောင် မြင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
上級Ⅱ3လ
Upper Advance LevelⅠ
研究Ⅰ3လ
3ヶ月 ကွင်းဆင်းလေ့လာမှု့ များ၊အင်တာဗျူးများစသည်တို့ ကိုစုစည်း၍ ရီပို့ ရေးသားခြင်း၊ Presentation လုပ်နိုင်စွမ်းရည်များတိုးတက်လာ ခြင်း၊ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ N1 အဆင့်ကိုအောင်မြင်နိုင် ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
Upper Advance Level Ⅱ
研究Ⅱ3လ
2015, April-term 2015, July-term 2015, October-term 2016, January-term
入学日 8th April, 2015 2th July, 2015 6th October, 2015
学習期間 12 - 24 months 21-24 months
18-24 months 15-24 months
申請期間 Sept. -29th Nov, 2014 Jan. - 31st March, 2015 April-31st May, 2015 July-30th Sept, 2015
Date of completion March, 2017 June, 2017 September, 2017 December, 2017
လျှောက်ထားမည့် သူတွင်ရှိရမည့် အရည်အချင်းများ
လျှောက်ထားသူသည် မူလတန်းမှ တက္ကသိုလ် အထိ 12နှစ်နှင့် အထက် ပညာဆည်းပူးထားသူ(သို့ )၎င်းနှင့် ညီမျှသောအောင်လက်မှတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးတက်ရောက်သင်ကြားခဲ့သောအတန်းပညာနှင့်ပတ်သက်၍အောက်တွင်ဖော်ပြ ထားသော အချက် (4) အနက်မှ အချက် 1 ချက်နှင့် ကိုက်ညီရမည် ဖြစ်သည်။
(1) အထက်တန်းစာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီ3းနှစ်အတွင်းရှိ သို့ မဟုတ် 2013ခုနှစ် 6လပိုင်းတွင်စာမေးပွဲအောင် မည့် သူ
(2) ကာလတိုတက္ကသိုလ်(သို့ )တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ ရပြီး 3နှစ်အတွင်းရှိသူဖြစ်ပြီးအသက် 24နှစ်အောက်
(3)တက္ကသိုလ်ပြီးဆုံး၍3နှစ်အတွင်းရှိသူဖြစ်ပြီး အသက် 27 နှစ်အောက်
(4) (1)～ (3) မဟုတ်ပါက ကျောင်းလျှောက်ထားချိန်တွင် ကာလတိုတက္ကသိုလ်(သို့ )တက္ကသိုလ်တွင်လက်ရှိတက် ရောက်သင်ကြားနေသောသူ
ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ N-5 နှင့်အထက် (သို့ ) J-TEST အဆင့် F နှင့်အထက် (သို့ ) NAT-TEST အဆင့် 5 နှင့် အထက်အောင်မြင်ထားသူ
* Qualification can differ between nationality and individual situations. Please ask more detail to the Academy.
※　လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း　募集要項はこちら
ဂျပန်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ (EJU) တန်း (အထွေထွေဘာသာရပ် ၊ သင်္ချာ)
ဂျပန်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲလေ့ကျင့်မှု့ အတန်း (အထွေထွေ ဘာသာရပ်၊သင်္ချာစသည်) ကိုဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးပါမည်။ဘာသာ ရပ်အလိုက်ကျွမ်းကျင်သောဆရာများဖြင့်စနစ်တကျလေ့ကျင့်သင် ကြားပေးခြင်းဖြင့်ရမှတ်ကောင်းများရရှိနိုင်ပါသည်။
ခန်းဂျိအသုံးမပြုသောနိုင်ငံများရှိကျောင်းသားများအ တွက်ခန်းဂျိ အရေး၊အဖတ်စသည်တို့ ကိုအခြေခံမှစတင်၍အသေးစိတ်သင် ကြားပေးပါမည်။
မိမိဝင်ရောက်လိုသောကျောင်း၊တက်ရောက်လိုသောဘာသာရပ် တက်ရောက်လိုသောဘွဲ့ လွန်ဘာသာရပ်တို့ သတ်မှတ်ပြီးသည်အ ထိတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်း၊ကျောင်းလျှောက်လွှာတင်ခြင်း၊တက်ရောက် သင်ကြားရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်စာစီစာကုံးရေးခြင်း၊လျှောက်လွှာဖြည့် ရာတွင်သတိထားရမည့်အချက်များနှင့်ရေးသားပုံရေးသားနည်းများကို သင်ကြားပေးခြင်း၊ကိုယ်တွေ့ မေးမြန်းခြင်းအတွက်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းစ သည်ဖြင့်ဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းပြီးဆုံးသည့်နောက်တွင်ဆက်လက် တက်ရောက်ရမည့်ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက်လည်းအစွမ်းကုန်ကူ ညီဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
အမှတ်ကောင်းသောကျောင်းသားများကို JASSO မှ ထောက်ပံ့သောပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးရရှိအောင် အာမခံပေးပါမည်။ (နှစ်စဉ် 3ယောက်မှ 5ယောက်) ကျောင်းတွင်းလပတ်စာမေးပွဲ၊ ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ၊ ဂျပန်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲရလဒ်များပေါ် မူတည်၍ကျောင်းတွင်းပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးချီးမြှင့်ပါမည်။
Click and download Preliminary application form.
Send Academy entered form by e-mail, fax, or post.
If you have any question, make contact with us from inquiry form
Applicants will be asked about their purpose of coming to Japan, their future plan and so on.
We will confirm if applicant have proper qualification for making application.
Applicants can consult about their documents and forms.
Download of Admission Prospectus
Fill out Forms and send Academy by post.
If you have any question, make contact with us from inquiry form.
Forms will be sent in to the Japanese Immigration Bureau by KIA to receive visa.
Issue of visa is screened by Japanese Immigration Bureau and notified to KIA.
Result of screening will be notified to applicant by KIA.
Applicant should pay tuition when he/she passed.
Apply to the consulate foravisa.
Come to Japan by the beginning of the term.